Ihe nkwụnye ọkụ na mpụga Edị E - N'ogbe diffusers maka mmanụ dị mkpa | AromaEasy
A na-eji Edị E mee ihe na France, Belgium, Poland, Slovakia, Czech Republic, Tunisia na Morocco. (Pịa Ebe a maka ndepụta zuru oke nke mba niile na-eji ụdị E)
France, Belgium na ụfọdụ mba ndị ọzọ nwere ọkọlọtọ n'ogo dị iche na ntọala CEE 7/4 (CEE XNUMX/XNUMX)ụdị F) nke ahụ bụ ọkọlọtọ na Germany na mba ndị ọzọ dị na Europe. Ihe kpatara incompatibility bụ na ịbanye n'ime oghere nke E a na-eme ya na ntụtụ nwoke gburugburu, nke a na-etinye na soket. Ntụtụ ụwa a bụ 14 mm ogologo ma nwee dayameta nke 4.8 mm. Ihe nkwụnye ahụ bụ ihe yiri C ma e wezụga na ọ dị okirikiri ma nwee mgbakwunye nke kọntaktị nwanyị iji nabata ntụtụ ya. Ihe nkwụnye ahụ nwere pịpị gburugburu 4.8 mm, na-agbanye 19 mm n'ogologo na etiti ndị dị na 19 mm iche. Oghere dị n'etiti etiti ahụ n'etiti nwanyị na etiti etiti ahịrị na-ejikọ atụ ike abụọ bụ 10 mm.
Iji mee ihe iji dozie ọdịiche dị n'etiti ntọala E na F, nkwalite CEE 7/7 (lee foto dị n'aka ekpe): ọ nwere mkpado ntanetị na akụkụ abụọ iji soro nwunye ụdị F anya na otu nwanyị si anabata ntinye aka nke ụdị E anya. Ejighi ụdị plọg E, nke na-enweghị mkpịsị mkpirisi, ọ bụ ezie na ọ na-adịkarị obere ka enwere ike ịhụ ya ụfọdụ ngwa ochie. Rịba ama na plọg CEE 7/7 nwere ihe na-enye ikikere mgbe ejiri ya na ụdị E apụta. E dere plọg a na amps 16. N'elu nke a, a ga-ejikọ akụrụngwa kpamkpam mains ma ọ bụ jikọọ ya site na njikọ njikọ ike dị elu dị ka sistemu nke IEC 60309. A ụdị C plọg dabara adaba n'ụzọ zuru oke n'ụdị E. A na - agbanye oghere mmachi ahụ 15 mm, yabụ etinye plọg etinyere n'ime ya anaghị eweta oke ihe ọghọm.
Plọgị ike na mpụga Ddị D